Michael Keating: Doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxay dhicii doontaa 15-ka December - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMichael Keating: Doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxay dhicii doontaa 15-ka December
Michael Keating: Doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxay dhicii doontaa 15-ka December
November 26, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating. [Xuquuqda Sawirka: UN News Centre]
Garowe-(Puntland Mirror) Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dib u dhacday ilaa iyo 15-ka bisha soo socota ee December, sida uu sheegay ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating.
Michael Keating oo shalay galab oo Jimce ahayd la hadlay BBC-da qaybteeda Afrika, ayaa sheegay in doorashada aysan dhici Karin wakhtigii hadda kahor loo asteeyay, laakiin hadda ay dhacayso 15-ka December.
“Waxaa la filayo in ay dhacaan waa wax sida saddex meelood labo meel oo ah doorashada xildhibaanada aqalka hoose… waxaa iyana jiri doonta wakhtiga doorashada afhayeenada aqalka hoose iyo aqalka sare iyo ku xigeenadooda iyo wakhtiga doorashada madaxweynaha,” ayuu Michael Keating u sheegay BBC-da.
“Waxaan qiyaasayaa in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 15-ka December,” ayuu ku daray.
Ilaa iyo hadda 130 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo 43 aqalka sare ah ayaa lasoo doortay. Aqalka hoose ayaa ka kooban 275 xildhibaan halka aqalka sare uu koobanyahay 54 xildhibaan
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa horey qorshu ahaa in ay dhacdo bishii lasoo dhaafay ee Agoosto, laakiin xukuumada Xasan Shiikh Maxamuud ayaa dhawaan dib ugu dhigtay 30-ka bishaan November, haddana waa 15-ka December.
Madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliya Xasan Shikh Maxamuud iyo Raysulwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u sharaxan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
October 16, 2016 Qaramada Midoobay oo codsatay in saddex kamid ah murashaxiinta aqalka sare ee Soomaaliya laga saaro liiska
December 25, 2016 Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka codsaday dhinacyada ay ka dhaxayso colaada Gaalkacyo in ay dhowraan heshiiska xabad-joojinta
November 7, 2016 Madaxweynaha dowladda Puntland iyo ergayga gaarka ah ee xoghayaha QM u qaabilsan Soomaaliya oo kulan ku yeeshay Boosaaso
Somali presidential election will be delayed until at least December 15, Michael Keating says
Ugu yaraan 11 qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay suuq kuyaala Muqdisho
Madaxweynaha Puntland oo u hambalyeeyay Axmed Madoobe
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa u hambalyeeyay Axmed Maxamed Islaam oo loo doortay madaxweynaha Jubbaland. “Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca goleyaasha dowladda iyo shacabka waxa uu hambalyo u dirayaa [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kalkaaliso Jarmal ah oo la shaqeysa haayada ICRC ayaa lagu afduubtay gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay sheegtay haayadu. Niman hubeysan ayaa Sonja Nientiet ka afduubtay xarunta ICRC ee Muqdisho shalay oo Arbaco [...]